३ सय ३१ जना कोरोना संक्रमित थपिए,कुन जिल्लामा कति बढे
काठमाडौँ। देशका विभिन्न प्रयोगशालमा गरिएको कोरोना परीक्षणमा थप ३ सय ३१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै कुल सङ्क्रमित आठ हजार ६ सय ५ पुगेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिएका हुन् । संक्रमित हुनेमा डोटी ६१,नवलपरासी पूर्व
विदेशी बुहारीले ७ वर्षपछि मात्रै अङ्गिकृत नागरिकता पाउने नेकपाको निर्णय
काठमाडौँ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकले प्रस्तावित नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा वैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न विवाह भएको सात वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था राख्ने गरी विधेयक अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा
४ सय २६ जनामा कोरोना,संक्रमित हुने ८ हजार नाघे
काठमाडौं । देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको कोरोना परीक्षणमा थप ४ सय २६ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै कुल सङ्क्रमित ८ हजार २ सय ७४ पुगेको छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले दिएको जानकारी अनुसार शुक्रबार संक्रमित हुनेमा ८८ जना महिला
सांसद विकास कोषको खर्च नभएको रकम कोरोना रोकथाममा खर्च गरिने
काठमाडौं । सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको खर्च हुन बाँकी रकम कोभिड– १९ रोकथाम तथा उपचारका लागि खर्च गर्न सक्ने निर्णय गरेको छ । स्थानीय निकायहरूले सो रकम कोरोना रोकथाम तथा उपचारमा खर्च गर्न सक्ने निर्णय भएको अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन्
कोरोनाबाट २२ जनाको मृत्यु,थप ६ सय ७१ जना संक्रमित
काठमाडौँ । नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप २ जनाको मृत्यु भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार कैलालीका दुई जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो । योसँगै कारोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या २२ पुगेको छ । मन्त्रालयको प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–४ घर भएका
मुस्ताङमा पनि कोराना संक्रमित,गण्डकी प्रदेशमा एकैदिन ७७ जना संक्रमित
पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा एकैदिन ७७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै प्रदेशमा संक्रमित हुनेको संख्या ३ सय २४ पुगेको गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङमा समेत कोरोना देखिएको छ । यसअघि गण्डकीका ११ जिल्लामध्ये मुस्ताङमा कोरोना फैलिन
५ सय ८६ जनामा कारोना,संक्रमित हुनेको संख्या ७ हजार बढी
काठमाडौं। देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप थप ५ सय ८६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । यो संख्या अहिलेसम्मकै उच्च हो । योसँगै सङ्क्रमितको सङ्ख्या सात हजार १ सय ७७ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले दिएको जानकारी
३ सय ८० जना कारोना संक्रमित थपिए
काठमाडौँ । देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको कोरोना परीक्षणमा थप ३ सय ८० जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै सङ्क्रमितको सङ्ख्या छ हजार ५ सय ९१ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले दिएको जानकारी अनुसार कुल संक्रमित हुनेमा महिला ४ सय ९९
३६ जन एसपीको सरुवा को कहाँ (सूचीसहित)
काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले सोमबार राति ३६ जना प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) को सरुवा गरेको छ । सरुवा अनुसार, भक्तपुर प्रहरी परिसरका प्रमुख सविन प्रधानको ठाउँमा एसपी तारादेवी थापालाई पठाइएको छ । इलाममा नविनराज राई, कविलवस्तुमा नवराज अधिकारी, गोरखामा सुरेन्द्रबहादुर गुरुङ, उदयपुरमा भिमबहादुर दाहाल,
कारोना संक्रमितको संख्या ६ हजार २ सय ११
काठमाडौँ । देशभरको विभिन्न प्रयोगशालमा गरिएको कारोना परीक्षणमा थप ४ सय ५१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या ६ हजार २ सय ११ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डा.जागेश्वर गौतमले सोमबार संक्रमित हुनेमा पुरूष ४१६ र महिला
४ सय २५ जनामा कोरोना,संक्रमितको संख्या ५ हजार ७ सय ६०
काठमाडौं। देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप ४ स य २५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या ५ हजार ७ सय ६० पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.जागेश्वर गौतमले आइतबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिएका हुन् । नयाँ संक्रमितहरू
जीप दुर्घटनामा प्रतापपुर गाँउपालिका अध्यक्षको निधन
काठमाडौं । जीप दुर्घटनामा परी पश्चिचम नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार शर्माको निधन भएको छ । गाउँपालिका कार्यालयबाट जिल्ला विपद् व्यस्थापन समितिको बैठकमा सहभागी हुन जाने क्रमममा भएको जीप दुर्घटनामा उनको मृत्यु भएको हो। लु १ झ ३७० नम्बरको जीप बर्दघाटको लक्ष्मीनगर पुलदेखि तल खोलामा
काव्य गोष्ठीमा महिलाका पीडा
काठमाडौं । कोरोनाको महामारीको संकटमा महिलाहरूले भोग्नु परेको अवस्थाको विषयमा विद्युतीय विचार गोष्ठी तथा काव्यकुशारी सम्पन्न भएको छ । संघीय राजधानीमा काठमाडौंमा हालै सम्पन्न उक्त समारोहमा उन्नति बोहरा, रन्जुश्री पराजुली,लक्ष्मी उप्रेती, विधान आचार्यलगायतका व्यक्तित्व उपस्थित थिए । ‘वुमन्स्
प्रतिनिधिसभाबाट अतिक्रमित भूमिसहितको नक्सा सर्वसम्मत अनुमोदन
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठकले अतिक्रमित नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी, र लिपुलेक क्षेत्र समावेश गरेको नेपालको नयाँ नक्सालाई सर्वसम्मत पारित गरेको छ । शनिबार बसेको संसद बैठकको पूर्ण (२५८) मतका साथ संविधानको अनुसूची तीन संशोधन गरेको हो । नेपालको संसदमा यो एउटा अभूतपूर्व घटना भएको टिप्पणी गरिएको
२ सय ७३ कोरोना संक्रमित थपिए
काठमाडौं। नेपालमा थप २ सय ७३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या पाँच हजार ३ सय ३५ पुगेको छ । शनिबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले संक्रमित हुनेमा पुरुष २ सय ४६ र महिला ३६ रहेको जानकारी दिएका छन् । संक्रमित हुनेमा
महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नेहरूले माफी माग्ने बेला आयोःउपेन्द्र यादब
काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टीका नेता उपेन्द्र यादवले राष्ट्रियताबारे आफ्नो दल एक ढिक्का हुने बताएका छन् । शनिबार सदनमा प्रस्तुत संविधानको दोस्रो संशोधनको छलफलमा बोल्दै नेता यादवले कसैको राष्ट्रियता आफ्नो र कसैको पराई मान्ने प्रवृत्तिले विभेद जन्माउने बताए । प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत संविधान संशोधनसम्बन्धी
कोरोना संक्रमितको संख्या पाँच हजार ६२,एकैदिन ४ सय ४८ थपिए
काठमाडौं । शुक्रबार नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप ४ सय ४८ सङ्क्रमित भएका छन् । योसँगै सङ्क्रमितको संख्या पाँच हजार ६२ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले थप सङ्क्रमित हुनेमा ४ सय २४ जना पुरुष र २४ महिला २४ भएको जानकारी दिएका छन्
काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेशमा थप ३७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । शुक्रबार बिहान स्याङ्जा, पर्वत, तनहुँ र पूर्वी नवलपरासीका थप ३७ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले बताएको छ । योसँगै प्रदेशमा संक्रमितको संख्या १ सय ८८ पुगेको छ । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका
लकडाउन खुकुलो, कुन–कुन कार्यालय खुल्ने ? कुन नखुल्ने ?
काठमाडौं । सरकारले लकडाउन खुकुलो गर्दै तत्कालका लागि सरकारी कार्यालय दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार अर्थ तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारी कार्यालय, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु दुई सिफ्टमा बिहान ८ बजेदेखि १ बजे
राष्ट्रियसभा बैठकः विद्युत् र टेलिकम महसुल छुट कार्यान्वयन गर
काठमाडौं -राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदले सरकारले बन्दाबन्दी अवधिमा विद्युत् महसुलमा छुट दिने निर्णय गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै गुनासो गरेका छन् । शून्य समयमा नेपाली कांग्रेसकी तारादेवी भट्टले गत चैत र वैशाखको कूल १ सय ५० युनिटसम्म २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय कार्यान्वयन नभएकामा
२ सय ७९ कोरोना संक्रमित थपिए
काठमाडौं । नेपालमा बुधबार थप २ सय ७९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै संक्रमितको संख्या ४ हजार ३६४ पुगेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डा.जागेश्वर गौतमले सो जानकारी दिएका हुन् । संक्रमित हुनेमा मोरङका ८ जना, झापाका ५ जना, चितवनका २ जना, उदयपुरका १ जना, नवलपुरका
राष्ट्रपतिको विरोध गर्ने गणतन्त्र विरोधीःप्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिको विरोध गर्नेहरू गणतन्त्र विरोधी भएको जिकिर गरेका छन् । स–सानो विषयलाई लिएर राष्ट्रपतिमाथि आक्रमण गर्नेहरू गणतन्त्रलाई कमजारे बनाउने तत्व भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । बुधवार संघीय संसदमा सांसदहरुले राखेको जिज्ञासाको
प्रधानमन्त्रीले ११ बजे संसदमा सम्बोधन गर्नुहुने
काठमाडौं, २८ जेठ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज संसदमा सम्बोधन गर्नुहुने भएको छ । बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालयका बिभिन्न शीर्षकहरुमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले
कोरोनाबाट १४ जनाको मृत्यु,संक्रमित ४ हजार नजिक
काठमाडौं । नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणले मृत्यु हुनेको संख्या १४ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित मिडिया ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले कोरोना भाइरसबाट स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका– ३ का ५८ वर्षिय पुरुषको निधन भएपछि कूल मृतकको संख्या १४ पुगेको जानकारी
कोरोनाबाट स्याङ्जाका ६० वर्षीय पुरुषको निधन
पोखरा । कोरोना संक्रमणबाट स्याङ्जाको वालिङ निवासी ६० वर्षीय पुरुषको निधन भएको छ । उनको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आइसोलेसनमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो । गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले उनको मृत्यु कोरोनाबाट भएको पुष्टि गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार मृत्यु भएका व्यक्ति जेठ २१ गते
२ सय १३ संक्रमित थपिए, कुल संख्या ३ हजार ४ सय ४८
काठमाडौं । देशभर विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप २ सय १३ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । संक्रमित हुनेमा पुरुष २ सय ९ जना छन भने महिला ४ जना रहेका छन् । योसँगै संक्रमितको संख्या ३ हजार ४ सय ४८ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.विकास देवकोटाका अनुसार संक्रमित हुनेमा झापाका
जनता समाजवादीमा नेतृत्व विवाद टुङ्गियो
काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्वमा सहमति जुटेको छ । सहमति अनुसार एकीकृत पार्टीको संघीय परिषद्को अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र केन्द्रीय समिति अध्यक्षमा महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव रहने छन् । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टी मिलेर बन्न लागेको जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्वमा
बैतडी । भारतबाट फर्किएकै दिन बैतडीमा एक व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । जिल्लाको पाटन नगरपालिका–६ स्थित भीमदत्त प्राविधिक शिक्षालय क्वारेन्टिनमा बसेका सोही वडाको सन्तोली घर भएका ३१ वर्षीय पुरुषको शनिबार राति मृत्यु भएको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पाटनका स्वास्थ्य सहायक प्रेमसागर भट्टले बताए । शनिबार
कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ११ पुग्यो,शुक्रबार थप २ सय ७८ मा संक्रमण पुष्टि
काठमाडौं । कोरोना संक्रमणबाट सुर्खेतमा एक जनाको मृत्यु भएको छ । सुर्खेतका पञ्चपुरी गाँउपालिकका २८ वर्षीया पुरुषको कोरोना रिपोट पोजिटिभ आएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ । यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्युहुनेको संख्या ११ पुगेको छ । १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बसेर घर फर्किएपछि